Abuur Tijaabooyin si fudud u hubi | Martech Zone
Abuur Tijaabooyin si fudud u hubi
Jimco, Febraayo 10, 2012 Jimco, Febraayo 10, 2012 Douglas Karr
Iyadoo la falanqeynayo qaar ka mid ah ogeysiisyada waqtiga dhabta ah maanta suuq-geynta suuqa macmiilkeena, Xuquuqda Interactive, Marty Thompson waxay la kulantay xiriiriye goobta imtixaanka la yiraahdo Hubi. Waa goob tijaabo ah oo aad u jaban oo leh tan astaamo iyo is-dhexgal aad u fudud, oo dareen leh si loo helo naqshadahaaga, boggagaaga iyo qaab-dhismeedkooda oo la tijaabiyo iyo soo qabashada jawaab celinta.
Waa tan muuqaalka muuqaalka Hubi:
Hubi waxay leedahay habab tijaabooyin soo socda oo la heli karo:
Guji Tijaabada - Eeg meesha isticmaaleyaashu guji iyaddoo ku saleysan su'aal.
Imtixaanka Maqalka - Soo ogow waxa dadku xusuustaan.
Imtixaanka Niyadda - Baro sida dadku u dareemaan shaashadda.
Tijaabada Xulashada - Muuji laba shaashad oo weydii kuwa isticmaala inay doortaan.
Tijaabinta Tijaabada - U oggolow isticmaaleyaashu in ay qoraallo ku qoraan shaashaddaada.
Tijaabada Calaamadaha - Weydii isticmaaleyaasha waxa ay cunsurrada qaarkood uga dhigan yihiin iyaga.
Tijaabo Tijaabooyin Badan - Eeg meesha isticmaaleyaashu riixaan shaashadda isku xigxiga.
Imtixaan isku xiran - Isku soo wada duuboo tijaabooyin badan hal socod.
In ka yar $ 30 bishiiba, Hubi wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si dhakhso leh u abuurto imtixaanno, la wadaagto imtixaannada oo aad natiijooyin u hesho - la wadaagista iyaga oo adeegsanaya Twitter, Facebook ama adoo adeegsanaya URL-yo gaar loo leeyahay, ka dibna kaa caawinaya inaad fahamto oo aad go'aanno ku gaadho si sahlan oo loo akhriyi karo, warbixinno muuqaal ah.
Tags: imtixaanka abjawaab celinta naqshadakala qaybinta imtixaankaimtixaankaqalabra'yi celinta isticmaaleqalabka naqshadeynta websaydhka
Qarixii Suuqgeynta Tusmada
Bisaylka Warbaahinta Bulshada